हाम्रो देश त भ्रष्ट मुलुक पो बनेछ
लोकतन्त्रले सम्पन्नता र सुशासन ल्याउँ छ भनेर खुब झ्याली पिटिएको थियो, हाम्रो देश त भ्रष्ट मुलुक पो बनेछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालैको रिपोर्टले नेपाल भ्रष्ट देशको सूचीमा, विश्वका १८० देशमध्ये १२२ औं स्थानमा पो रहेछ । देश यसरी भ्रष्ट हुनु भनेको लोकतन्त्रको उपलव्धि मान्ने हो भने त ठिकै छ, अन्यथा लोकतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरुका लागि योभन्दा शरमको विषय अरु हुनसक्छ र ?
भन्नलाई भनियो– गत वर्ष देश १३१ स्थानमा थियो रे, भ्रष्टाचार घटेकाले १२२ मा आएकोले यो सकरात्मक देखिएको छ । भ्रष्ट मुलुक हुनु पनि सकारात्मक हुन्छ कहिले ? रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेको यो कथनले भ्रष्टहरुमा उत्साह त थपेन ?
राजनीति, वित्तीय अनुशासन, न्यायमा पहुँचलगायतका ६ मापदण्डका आधारमा भ्रष्ट मुलुकको पहिचान गरिने बताइएको छ । न्यूजिलेण्ड र डेनमार्क पहिलो र दोश्रो भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनेका छन् । हामी विकासशील मुलुक, हाम्रो उन्नति भनेकै सुशासनमात्र छ । जब सुशासन भ्रष्टाचारमय बनेको छ भने देश कहिले विकासशील र विकसित हुने ? मन बुझाउन अफगानिस्तान र बंगलादेशभन्दा हामी सुशासित देश छौं रे । यस्तो कुराले देश बन्दैन । कुनै हालतमा बन्दैन ।
सुशासन र सम्पन्नता हाम्रो एकमात्र लक्ष्य भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले । यदि यही उद्देश्य हो भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने ताकत राख्न सक्नुपर्छ । आफ्नै पार्टीका मान्छेले भ्रष्टाचार गरेका छन्, असामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् भने पनि तिनको ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति जुन बसेको छ राजनीतिमा, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मुलाहिजा छाड्नुपर्छ, कानुनलाई आफ्नो कारवाही चलाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, अप्रिय र अराजक सिफारिस अथवा प्रभाव दबाब दिन सबैलाई बन्देज लगाउनुपर्छ । यति गर्नसके प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सुशासन र सम्पन्नताको अग्रगमनकारी मार्ग धेरै नै प्रशस्त हुनसक्छ ।
लक्ष्य प्रधानमन्त्रीले लिएका छन्, लक्ष्यप्राप्तिका लागि इच्छाशक्ति हुनैपर्छ । इच्छाशक्ति पूरा गर्न विधिप्रतिको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । तवमात्र कुनै प्रधानमन्त्री सफल वा असफल हुनेछन् । हामी प्रधानमन्त्रीको सुशासन र सम्पन्नता ल्याउँछु भन्ने इच्छा पूरा होस् भन्ने चाहन्छौं, आत्मशक्ति मिलोस् ।